Askariyad caan ah oo Kurdi ah ayaa ku dhimatay dagaalka IS - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka @albertohrojas
Image caption Asia Ramazan Antar ayaa dhimatay iyadoo la dagaalamaysa IS
Sida ay qoreen warfaafinta reer Galbeedka waxay ahayd gabar qurux badan, oo aad looga helay quruxdeeda iyo xirfadeeda milatari.
Laakiin askarta ay ka mid ahayd Asia Ramazan Antar ayaa sida looga hadlay warbaahinta iyo baraha bulshada noqotay mid ay la yaabaan oo ay ka xumaadaan.
Asia Ramazan Antar oo 19 jir ah oo ka timid magaalada Suuriya ee Kurdiyiinta ee Qamishli, ayaa waxaa dilay kooxda mintidiinta ee IS ee waqooyiga Suuriya bishii hore.
Iyagoo xooga saaraya warka ku saabsan quruxdeeda, qaar ka mid ah warbaahinta reer Galbeedka ayaa sheegay in loo yaqaanay "Angelina Jolie ee Kurdistan" oo lala matalay jilaa caan ah ee Hollywood ee Angelina Jolie.
Kurdish Women's Protection Units (YPJ), oo Ramazan ay ka mid ahayd, ayaa sheegay in falsafadooda ay tahay wax fudud iyo dulqaad.
Qofna laguma qiimeeyo sida uu u egyahay iyo cabirkiisa. Qof walba ayay sheegeen inuu dulqaad wayn u sameeyo dadka oo dhan.
Image caption Ciidamada ay qaybta ka ahayd Asia Ramazan Antar ayaa u arkay sida looga hadlay quruxdeeda oo kaliya in wax loo dhimay
Lahaanshaha sawirka YPG
Image caption Asia Ramazan Antar ayaa lala duugay dagaalyahano dumar ah oo aan warbaahinta aysan ka hadlin
"Falsafadeena oo dhan ayaa ah inaan la dagaalano in dumarka aan la takoorin oo aan laga dhigin wax la leeyahay oo kale."
"Waxaan rabnaa inaan dumarka siino xaqooda ay bulshada ku leeyihiin iyo inay go'aan ka gaaraan waxa ay doonayaan inay sameeyaan" ayuu sheegay Kanaani.